China Juda Kiln-Cross icandelo elisezantsi kumzi-mveliso we-onti kunye nabavelisi | Yuda
Ukusebenza okuphezulu kwezixhobo
(1) Imveliso ephezulu yemihla ngemihla (ukuya kwiitoni ezingama-300 ngosuku);
(2) Umsebenzi ophezulu wemveliso (ukuya kwi-260 ~ 320 ml);
(3) Izinga lokutsha eliphantsi (≤10 pesenti;)
(4) Umxholo ozinzileyo we-calcium oxide (i-CaO≥90 ipesenti);
(6) Ukunciphisa ubungakanani bekalika esetyenziswa yimveliso emva kokusetyenziswa lishishini (30 pesenti ukwenza intsimbi, desulphurization kunye slagging, 25 pesenti kwimveliso calcium hydrogen phosphate , 20 pesenti kwimveliso yeferroalloy kunye 20 ekhulwini calcium. imveliso ye-carbide alumina);
(7) Isivuno esiphezulu kwimveliso yeyunithi emva kwentsimbi (imveliso yemveliso inokunyuswa ngaphezu kwe-1%);
(8) Ungcoliseko oluphantsi (ukukhutshwa kwe-SO2 ngaphantsi kwemigangatho yolawulo lwesizwe);
(9) Inkunkuma esebenzisekayo, njengerhasi eyinkunkuma kunye nenye inkunkuma.
Iimpawu zenkqubo yokuvelisa:
1) uhlobo lwesithando somlilo lunengqiqo, usebenzisa i-vase imilo yangaphakathi. Olu yilo lwenza iyunifomu yokuhanjiswa komoya kunye nezinto zifudunyezwe ngokulinganayo, nto leyo engabancedisi kuphela ukuncipha okufanayo kwezinto, kodwa kunye nokwanda okuqhubekayo kwendawo enqamlezayo, ehambelana nokutshintshiselana kobushushu phakathi kwegesi kunye negesi. izinto eziphathekayo, kwaye inika umdlalo opheleleyo kwisiphumo sokufudumeza kwangaphambili kokuhamba komoya phezu kwelitye. Nciphisa ilahleko yobushushu. Ukutshintsha kwe-dimeter ye-kiln yomzimba kunenzuzo kwi-preheating yezinto, ukutshiswa kwepetroli kunye nokusetyenziswa kwamandla okushisa, ukukhawuleza kwe-lime calcination, ngoko ukunciphisa ukusetyenziswa kwamafutha, ukupholisa i-lime ngokupheleleyo, ukunciphisa ubushushu bomlotha kunye nokubuyisela amandla okushisa. Nciphisa ukusetyenziswa kwamandla.
2), umgaqo wonikezelo komoya wamkelwa, indawo esezantsi inyanzeliswa kukuvuthela, indawo ephezulu yi-flue ye-annular kunye ne-gravity inertial dust collector, kunye ne-fan ene-induced kunye ne-chimney force isetyenzisiweyo, engenzi kuphela ukukhusela okusingqongileyo kunye. ukususwa kothuli, kodwa luncedo ekwandiseni umthamo womoya kunye nemveliso.
3) ukugcinwa kwamandla kunye nokukhuselwa kokusingqongileyo izixhobo ezisebenzayo ze-kalika zilula kwaye zithembekile, ubomi obude, iindleko eziphantsi zemveliso kunye nokugcinwa.
Indawo ekuhlalwa kuyo
I-anthracite, 2-4cm, ixabiso le-calorific ngaphezu kwe-6800 kcal/kg
I-125-130 kg yamalahle aqhelekileyo kwi-1 ton yekalika
Isakhiwo sentsimbi yangaphandle kunye ne-firebrick lining
Ibhanti yokuhambisa ngehood
Ukuhanjiswa kwamalahle kunye nekalika
Amacala amane Ukukhupha
Ukususwa kothuli lwe-Cyclone + iradiyetha enemibhobho emininzi + ukususwa kothuli lwengxowa yohlobo + lokususa ifilim yamanzi desulfurization
Ulawulo lwekhompyuter oluzenzekelayo ngokupheleleyo
Umqhubi wenkqubo ye-1;
Igcisa eli-1 leziko;
Umsebenzi o-1 wokulungisa;
1 umqhubi womlayishi
120-150 iintsuku zokusebenza ezisebenzayo
Ngaphambili: Igrill yesithando soMzimba weKiln
Okulandelayo: Kiln Body Steel Assembly
9. Inkqubo yothuthu Umgaqo we-screw cone ash remover yitreyi ye-spiral spiral efana nenqaba enehood exhaswe kwi-tug. Elinye icala le-tray lixhotyiswe nge-discharge scraper. I-motor kunye ne-reducer iqhutywa yi-bevel gear ukujikeleza itreyi. Umatshini wokuthulula uthuthu lwe-cone unenzuzo yokukhutshwa okufanayo kwecandelo lonke le-shaft kiln, kwaye unamandla athile okugqithisa kunye nokutyumza kwiqhina lekalika ngamaxesha athile, ngoko ke ubukhulu bangaphakathi busetyenziswa kwi-4.5 m-5.3m yekalika...
I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, ICalcium oxide Production Line, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing,